Ndị na -eme njem nlegharị anya India: Otu esi enweta ijeri US $ 400 na mbupụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Ndị na -eme njem nlegharị anya India: Otu esi enweta ijeri US $ 400 na mbupụ
Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya India na nzukọ ndị ozi
Ndị otu ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke India (IATO) nyere ọtụtụ ndụmọdụ na nzukọ nke Minista Azụmaahịa na Mmepụta, Shri Piyush Goyal kpọrọ, iji nweta ntinye n'aka ndị na -ebubata ngwaahịa na usoro achọrọ ka a ga -eme na oku PM iji mụbaa mbupụ. ruo ijeri US $ 400 n'afọ a ma kpọga India na akụ na ụba US $ 5 ijeri n'ọdịnihu.
Usoro dị ka imepe visa ndị njem nlegharị anya na ịmaliteghachi ọrụ ụgbọ elu mba ụwa nkịtị dị n'elu ndepụta ahụ.
Ọzọkwa rịọrọ bụ na atụmatụ mbupụ si India ga -aga n'ihu ruo afọ ise na -esote ma tinye ya na atụmatụ RoDTEP na amụma azụmaahịa mba ofesi.
Ebumnuche a bụ iji kwughachi ndị na -ebubata ngwa ahịa, ụtụ, ụtụ na ụtụ ha kwụrụ na etiti, steeti na mpaghara.
Na -anọchite anya ụlọ ọrụ njem, Rajiv Mehra, Onye isi ala Associationtù India nke ndị na -ahụ maka njem (IATO), tụrụ aro usoro dị ka imepe visa e-njem nlegharị anya, ịmaliteghachi ọrụ ụgbọ elu mba ofesi, wdg. Atụmatụ India) maka afọ ego 2019-20 dị mkpa maka nlanarị ha.
Maazị Mehra rịọkwara ka atụmatụ mbupu sitere na India gaa n'ihu maka afọ ise na-abịanụ ma tinye ya na atụmatụ RoDTEP na amụma azụmaahịa mba ofesi maka 5-2021. Ebumnuche a bụ iji kwughachi ndị na-ebubata ngwa ahịa, ọrụ, ụtụ isi na ụtụ isi ha kwụrụ na etiti, steeti na mpaghara, ọ na-ekpuchikwa ụzọ abụọ n'ụzọ atọ, 26% nke mbupụ mba ahụ.
Onye isi ala IATO kwukwara na minista ahụ ụlọ ọrụ ndị njem bụ nnukwu onye na -erite ego na mba ofesi, n'ihi ya, ekwesịrị inye ọkwa nke onye ekesara dị ka onye na -ebubata ihe na ndị na -ebubata ọrụ na mbupụ. Ntugharị dị otu a nwere ike ịkwalite asọmpi ha na mba ndị ọzọ agbata obi wee si otú a nwee ike ịkwalite ndị mbata na ọpụpụ ndị mba ọzọ, ka ọ rụrụ ụka.
Ọzọkwa, Onye Minista Azụmaahịa na Mmepụta nke Union rịọrọ ka mmejuputa iwu nke Ngwa na Ngwa Ọrụ Integrated (IGST) na -eme ebe ndị njem na -ahapụ India iwe nwere ikike nkwụghachi nke IGST kwụrụ na India na ngwongwo ndị a na -esi na India. n'okpuru atụmatụ nkwụghachi ụtụ maka ndị njem (TRT).
Maazị Mehra kwuru, “Dị ka ọkwa nke ka ukwuu, India nwere nnukwu njem njem, mana iji ruo na anyị chọrọ nkwado gọọmentị n'ihe gbasara mkpali ego yana nkwalite akụrụngwa anụ ahụ. Ebe gọọmentị na -elekwasị anya n'ịkwalite ịma mma India, ejiri m n'aka na anyị ga -ahụ ọganihu dị ka anyị na -ahụtụbeghị mbụ. ”